27 UJehova wakhuluma noMose, wathi: 2 “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘Uma kwenzeka umuntu enza isithembiso esikhethekile lapho enza umnikelo wemiphefumulo+ kuJehova, ngokuvumelana nenani elilinganisiwe, 3 futhi inani elilinganisiwe kumelwe libe elowesilisa osukela eminyakeni engamashumi amabili kuya eminyakeni engamashumi ayisithupha ubudala, khona-ke lelo nani elilinganisiwe kumelwe libe amashekeli angamashumi amahlanu esiliva ngokweshekeli lendawo engcwele. 4 Kodwa uma kungowesifazane, khona-ke inani elilinganisiwe kumelwe libe amashekeli angamashumi amathathu. 5 Uma iminyaka yobudala isukela eminyakeni emihlanu kuya eminyakeni engamashumi amabili, khona-ke inani elilinganisiwe lowesilisa kumelwe libe amashekeli angamashumi amabili, elowesifazane libe amashekeli ayishumi. 6 Uma iminyaka yobudala isukela enyangeni kuya eminyakeni emihlanu, khona-ke inani elilinganisiwe lowesilisa kumelwe libe amashekeli amahlanu+ esiliva kanti inani elilinganisiwe lowesifazane kumelwe libe amashekeli amathathu esiliva. 7 “‘Uma iminyaka yobudala isukela eminyakeni engamashumi ayisithupha kuya phezulu, uma kungowesilisa, khona-ke inani elilinganisiwe kumelwe libe amashekeli ayishumi nanhlanu elowesifazane libe amashekeli ayishumi. 8 Kodwa uma eye waba mpofu kakhulu ukuba abe namandla enani elilinganisiwe,+ khona-ke kumelwe amise lowo muntu phambi kompristi, umpristi abeke inani kuye.+ Umpristi uyobeka kuye inani elicatshangelwe ngokuvumelana nalokho lowo owenza isithembiso angaba namandla ako.+ 9 “‘Uma kuyisilwane esinjengaleso umuntu asiletha njengomnikelo kuJehova, konke lokho angase akunike uJehova kuyoba yinto engcwele.+ 10 Akanakuletha okunye esikhundleni sako, futhi akanakwenana okubi ngokuhle noma okuhle ngokubi. Kodwa uma nakanjani ekwenana kube isilwane ngesilwane, khona-ke sona kanye naleso asenana ngaso kumelwe zibe yinto engcwele. 11 Uma kuba yinoma yisiphi isilwane esingcolile+ njengaleso umuntu angenakusiletha sibe umnikelo kuJehova,+ khona-ke kumelwe amise lesi silwane phambi kompristi.+ 12 Umpristi kumelwe asinqumele inani elilinganisiwe lilihle noma lilibi. Ngokuvumelana nenani elilinganiswe+ ngumpristi, kufanele kube njalo. 13 Kodwa uma nakanjani efuna ukusibuyisa ngokusithenga futhi, khona-ke kufanele akhiphe okwesihlanu+ kwaso ngaphezu kwenani elilinganisiwe. 14 “‘Uma kungenzeka umuntu angcwelise indlu yakhe njengento engcwele kuJehova, khona-ke umpristi kufanele alinganise inani layo lilihle noma lilibi.+ Ngokuvumelana naleso silinganiso senani umpristi asenzayo ngayo, kufanele ibize kangako. 15 Kodwa uma oyingcwelisayo efuna ukuyibuyisa ngokuyithenga futhi indlu yakhe, khona-ke kumelwe akhiphe okwesihlanu ngaphezu kwemali yenani elilinganisiwe;+ khona-ke iyoba ngeyakhe. 16 “‘Uma kungukuthi lokho umuntu akungcwelisela uJehova kuyingxenye ethile yensimu yefa lakhe,+ khona-ke inani kumelwe lilinganiswe ngokulingana nembewu yayo: uma kuyihomere+ lembewu yebhali, khona-ke kuyoba amashekeli angamashumi amahlanu esiliva. 17 Uma engcwelisa insimu yakhe kusukela ngonyaka weJubili+ kuqhubeke, kufanele ibize ngokuvumelana nenani elilinganisiwe. 18 Kodwa uma kungukuthi insimu yakhe uyingcwelisa ngemva kweJubili, khona-ke umpristi kumelwe ambalele intengo ngokulingana neminyaka ngaphambi kokuba kube unyaka olandelayo weJubili, futhi kufanele lisuswe enanini elilinganisiwe.+ 19 Kodwa uma oyingcwelisayo eyibuyisa ngokuyithenga futhi, khona-ke kumelwe akhiphe okwesihlanu ngaphezu kwemali yenani elilinganisiwe, futhi kumelwe ime ngokuqinile njengeyakhe.+ 20 Manje uma le nsimu engayibuyisi ngokuyithenga futhi kodwa ithengiselwa omunye umuntu, ayinakuphinde ithengwe futhi. 21 Lapho le nsimu iphuma ngeJubili kumelwe ibe yinto engcwele kuJehova, njengensimu enikelwe.+ Iyoba yifa lompristi.+ 22 “‘Uma eyingcwelisela uJehova insimu ethengwe nguye engeyona ingxenye yensimu yefa lakhe,+ 23 khona-ke umpristi kumelwe ambalele ubungako benani kuze kube unyaka weJubili, futhi kumelwe asho inani elilinganisiwe ngalolo suku.+ Iyinto engcwele kuJehova.+ 24 Ngonyaka weJubili insimu iyobuyela kulowo ayithenga kuye, kulowo ifa lezwe elingelakhe.+ 25 “‘Manje lonke inani kumelwe lilinganiswe ngeshekeli lendawo engcwele. Ishekeli kumelwe libe amagera angamashumi amabili.+ 26 “‘Yizibulo kuphela phakathi kwezilwane, elizalwa njengezibulo likaJehova,+ okungekho muntu okufanele alingcwelise. Kungakhathaliseki ukuthi yiduna lenkomo noma elemvu, lingelikaJehova.+ 27 Uma liphakathi kwezilwane ezingcolile+ futhi kumelwe alihlenge ngokuvumelana nenani elilinganisiwe, khona-ke ngaphezu kwalo kumelwe akhiphe okwesihlanu kwalo.+ Kodwa uma lingenakubuyiswa ngokuthengwa futhi, khona-ke kumelwe lithengiswe ngokuvumelana nenani elilinganisiwe. 28 “‘Kuphela akukho luhlobo lwento enikelwe umuntu angase ayinikele kuJehova ukuba ibhujiswe+ kukho konke okungokwakhe, kungakhathaliseki ukuthi kuphakathi kwabantu noma izilwane noma insimu yefa lakhe, engase ithengiswe, futhi akukho nto yanoma yiluphi uhlobo enikelwe engase ibuyiswe ngokuthengwa futhi.+ Iyinto engcwelengcwele kuJehova. 29 Akukho muntu onikelwe okungenzeka anikelwe ekubhujisweni phakathi kwabantu ongase ahlengwe.+ Kufanele abulawe nakanjani.+ 30 “‘Konke okweshumi+ kwezwe, okuvela embewini yezwe nasesithelweni somuthi, kungokukaJehova. Kuyinto engcwele kuJehova. 31 Uma umuntu efuna ukubuyisa noma yikuphi okweshumi kwakhe ngokukuthenga futhi, kufanele akhiphe ngaphezu kwako+ okwesihlanu kwako. 32 Kepha konke okweshumi komhlambi wezinkomo nomhlambi wezimvu nezimbuzi, konke okudlula ngaphansi kwengobe,+ inhloko yeshumi kufanele ibe yinto engcwele kuJehova. 33 Akufanele ahlole ukuthi kuhle noma kubi yini, futhi akufanele akwenane. Kodwa uma ekwenana, khona-ke kona nalokho okwenanwa ngakho kumelwe kube yinto engcwele.+ Akunakubuyiswa ngokuthengwa futhi.’” 34 Lena yimiyalo+ uJehova ayinika uMose ukuba ibe yimiyalo kubantwana bakwa-Israyeli eNtabeni yaseSinayi.+